China Yakakwira bhokisi mubhedha yakasimba huni huviri mubhedha wekuchengetedza mubhedha # 0111 Kugadzira uye Fekitori | Yamazonhome
Yakakwira bhokisi mubhedha yakasimba huni huviri mubhedha wekuchengetedza mubhedha # 0111
Zita: mubhedha webhokisi
Muenzaniso nhamba: Amac-0111
Kukura: 1500 / 1800mm * 2000 * 800mm
Solid huni bhokisi mubhedha
Yakareruka fashoni fenicha, yakasununguka huni ruvara uye chimiro, hapana yakanyanyisa kuomarara dhizaini, isina kusimba uye kuwedzeredza chimiro, rega vanhu vakanganwe mutinhimira wekushambadza uye kusagadzikana, vagadzire imba inodziya, uye vatarise pakunakidzwa noutano, yakasikwa uye yakagadzikana Nordic nguva.
Yese bhodhi yakananga musangano maitiro
Iyo yakananga kuungana kwebhodhi rakakura zvinoreva kuti pane chete yakatwasanuka nekukanda uye pasina kukanda munzira yehurefu, izvo zvinoita kuti fenicha magadzirirwo aripure akanaka, akaomarara zvinhu, zvinorema huremu, uye kugona kwakanaka kugona.
North America Yakakwira Hunhu White Oak
FAS-giredhi oak inoenderana nemitemo yekuisa yeNHLA muUnited States. FAS-giredhi inoreva kugona kupa yakareba yakachena pamusoro, mapatani akanaka, uye mashoma mavanga. Iri giredhi rehuni rakanyanya kukodzera kugadzira fanicha. Uye iyo fenicha yakagadzirwa yakasimba uye inogara kwenguva refu, kwete nyore Kutsemuka, kupfeka nemishonga uye ngura nemishonga, kwete nyore kuumbwa.
Yakakwira-yepamusoro pneumatic tsvimbo + chengetedzo chigadziko
Mhepo yekumanikidza tsvimbo inotsigira zviri nyore bhodhi yekumutsa, metiresi, uye kupeta uye kuburutsa mbatya hakuna basa, uye kuvhura nekuvhara kwakadzikama uye kuri nyore. Iyo yepamusoro yemubhedha inogona kugadzirwa nehupamhi hwe 85mm, iyo inogona kushandiswa kuisa zvinhu zvidiki senge nhare mbozha. Inofungisisa uye yakasununguka. Kune maviri akachengetedzeka maviri-maburi masokisi pane iyo headboard, iyo inogona kushandiswa kumarambi ehusiku kana kuchaja, iri nyore kwazvo uye yakanaka kune vane usimbe vanhu.
Kupfapfaidza kwakanaka kwependi yepanyama
Iyo pendi zviyero zvakanyanyisa kuomarara. Iyo yakazara yakavhurika nzira yekumwaya haina kukuvadza kumuviri wemunhu, zvakanyanya kugarisana nharaunda uye hutano. Chigadzirwa chitsva hachina kana kuravira, uye hwema hwehuni chete hunobuditswa. , Hutano hwepanyama, hapana kusvibiswa.
Solid huni mubhedha nekuchengetedza
Mushure mana akateedzana kupopera, iyo pendi yepamusoro yakasimbiswa, uye inopa yakasikwa uye inoyevedza kubwinya, ichibvumira iyo machira, ruvara uye maratidziro ehuni rakasimba kuti zvionekwe zvakasununguka. Kune yakanaka fenicha, ruzivo ndirwo hwaro, uye zvese zvakadzama kuratidzwa kwemhando.
Yakatenderedzwa kona dhizaini
Iyo yemubhedha musoro wekutsvedza dhizaini inokodzera iyo yekumashure curve zvirinani mukushandisa, inoregedza kumanikidza kwakaunganidzwa kumusana panguva yebasa, uye kunoita kuti kusendamira kuve nyore. Musoro wemubhedha wakakomberedza makona ane hushamwari dhizaini, makona ese akasvinwa uye akapukutwa, uye chigadzirwa chakachengeteka Vandudza, rega iwe uende kunorara uine pfungwa yekuchengetedzeka.
Yakakura nzvimbo yekuchengetera + yepamusoro mhando yekubatanidza
Yakakura nzvimbo yekuchengetera yakaenzana newadhiropu yechipiri muimba yekurara. Inofananidzwa neyakajairwa mibhedha, iwo mubhedha webhokisi une mukana wehukuru hukuru. Iwe unogona kuisa makutu akati wandei uye mbatya dzechando pamadiro, uye nzvimbo yacho inoshanda uye inochengetedza nzvimbo yemba. Unyanzvi, mhando yepamusoro yekubatanidza Hardware, yakagadzikana uye yakavimbika pasina kubvunda kana kuzungunuka, uye inonzwisisika uye yakasimba chimiro.
Iyo yakasimba huni mibhedha yemubhedha yakarongedzwa zvine mutsindo
Iyo yemubhedha bhodhi inogadzirwa yemhando yepamusoro yemapine huni, uye paini huni inotemwa zvakananga uye yakapetwa pasina yechipiri kugadzirisa uye kupenda. Iyo inoshamwaridzika nharaunda uye ine hutano, uye ruvara rwehuni uye hwema hwakazara nehunyanzvi hwepanyama. Yese yemubhedha bhodhi yakarongedzwa zvakaringana uye zvakashongedzwa pamwe chete, izvo zvinoita kuti iro rekutakura riwedzere kusimba, uye zviri nyore kusvetuka nekutamba pairi.
Pashure: Gymnastics Mhepo Mat 2m 3m 4m nyanzvi Inflatable yemhepo track Yoga Sport kurwira pad kudzivirira kudzivirira kukuvara kwekudonha mateti 0388
Zvadaro: Wholesale DWF inflatable yoga mat tsika mutambo wemhepo track Gymnastics Tumbling Mat Mhepo Floor 0393
Asingapeteki akazotsiviwa nemapepa aipeteka pamubhedha Tafura uye Yekudzidza Tafura Nyore F ...
Nordic Yemazuva Ano Solid Wood Wood Kamuri Yekugara-Ruvara ...
Nyore Windsor Mubhedha Solid Wood Yekurara Mubhedha Princ ...
Mazuva Ano Rakaomarara Rakaomarara Wood Tsika Sofa Set # 0028